रोजगारीमा जानेहरुबाट भन्दा विद्यार्थीहरुबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको छ – Businesssansar
रोजगारीमा जानेहरुबाट भन्दा विद्यार्थीहरुबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको छ
मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको शिक्षा आर्जनका लागि नयाँ पुस्ता देश भित्र भन्दा पनि देश बाहिर जान तल्लीन छ । देशमा जती सुकै परिवर्तन भएको भनिए पनि यहाँको शिक्षामा परिवर्तन आउन नसक्दा र शिक्षा व्यबसायीक हुन नसक्दा लाखौं यूवाहरु अध्ययनका लागि विदेशीने गरेका छन् । विदेश जानु अध्ययनको लागि मात्रै नभएर आय आर्जनको बाटो पनि बनेको छ । यी लाखौं विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सी (शैक्षिक परामर्श दाता) को साझा संस्था शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को हालै सम्पन्न अधिवेशनले कुशल, अनुभवि तथा दक्ष मानिएका व्यक्तित्व राजेन्द्र वरालको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गरेको छ । प्रस्तुत छ इक्यानका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालसँग पत्रकार माधव निर्दोषले गर्नुभएको कुराकानी ः
तपाईको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ, के कारणले तपाईकै नेतृत्व दोहोरीयो ?
विशेषत मैले नेपाल शैक्षिक परामर्श संघलाई साझा संस्थाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने कुरालाई जोड दिँदै आएको हुँ । त्यसका साथै विदेश जाने विद्यार्थीलाई उचित विश्व विद्यालय छनौट गर्ने सवाल, उनिहरुको शिक्षा र प्रविधिलाई नेपाल भित्राएर प्रयागवमा ल्याउने सवाल तथा नेपाललाई विश्वकै शैक्षिक हब बनाउने सवाल र सरकारसँग उचित निति बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई वारम्बार उठान गर्दै आएका कारण साथीहरुले साथ दिनुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
विदेशमा विद्यार्थीले आर्जन गरेको शिप, शिक्षा र प्रविधि नेपालमा कार्यान्वयन भएको छ र ?
एउटा नेपाली विद्यार्थी शिक्षा आर्जनका लागि त्यहाँ जाँदा निश्चित रुपमा धेरै किसिमका प्रविधिहरु सिकिसकेको हुन्छ । उसले आर्जन गरेको शिक्षा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आज एनआरएनएका कैंयौं साथीहरु हाम्रै माध्यमबाट विदेश जानु भएको हो । जसले नेपालमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी भित्राउन मद्यत गर्नुभएको छ । साथै उहाँहरुले यहाँको लगानीमा समेत साथ दिनुभएको छ । र आगामी दिनमा यो सवाललाई जोडदार रुपमा उठाउन सकियो र विदेशमा सिकेको शिक्षा र प्रविधिलाई राज्य र हामी सबै पक्ष मिलेर यहाँ लागु गर्नतर्फ लागियो भने धेरै सम्भावनाहरु छन् । त्यसका लागि इक्यानले सक्दो रुपमा आफूलाई परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
तपाईले यति राम्रा कुरा गरिरहँदा कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी ठगीएका कुरालाई पनि सम्झनु पर्ला नि ?
त्यो कुरा पनि एउटा समाधान गर्नुपर्ने सवाल हो, हरेक क्षेत्रमा संख्या बढ्दै जाँदा कतिपय त्यस्ता नियत भएका व्यक्तिहरु यस क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेहोलान्, जसले सिंगो परामर्श क्षेत्रलाई बदनाम गर्न उद्यत छन् । त्यसकै लागि त हामीले सरकारसँग मिलेर नितिहरु, निर्देशिकाहरु ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई जोडदार रुपमा उठाएका छौं नि । हामी आगामी दिनमा यो क्षेत्रलाई अझ असल र राम्रो बनाउन लागि रहने छौं भन्न चाहान्छु ।
तपाईको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका सामु असन्तुष्ट पक्षहरुलाई समेट्ने लगायतका चुनौतिहरु प्रसस्तै छन् होइन ? त्यस्तो असन्तुष्टि खासै छैन । तै पनि केही साथीहरुको मनमा त्यस्तो हुन सक्ला । त्यो कुरालाई राम्ररी मनन् गरेर उहाँहरुका सवाललाई पनि समेटेर हामी अघि बढ्छौं । यो शैक्षिक परामर्श संघ भनेको देशैभरीका शैक्षिक परामर्शदाताको साझा संस्था हो । यसर्थ यसमा आउने समस्या पनि हाम्रा साझा समस्या हुन् भन्ने मलाइ लाग्छ । यी जे जस्ता समस्या र चुनौतिहरु छन् ती सबै कुरालाई समाधान गरेर हामी अघि बढ्छों ।
कतिपय शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु परामर्श संघमा दर्ता नभएको अबस्था पनि छ नि ?
त्यस्तो पनि छ, उहाँहरुलाई म जति सक्यो छिटो यस संघमा आबद्ध हुन अनुरोध गर्दछु । साथै उहाँहरुले यसको आवश्यकता र महत्व अब बुझ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ, आगामी दिनमा उहाँहरु सबैलाई यस संस्थामा अटाउन सक्नेगरी हामी अघि बढ्ने छौं र सबैलाई समेटेर लैजाने छौं ।
विद्यार्थीहरु विदेशमा जानु भनेको घुमाउरो भाषामा रोजगारको खोजिमा जानु नै हो नि, होइन ?
अबश्य पनि, रोजगारको लागि मात्रै भन्न त मिल्दैन तथापि, हामी नेपालीहरु विदेश जाने भनेको आफ्नो आर्थिक पक्षलाई पनि मजबुत बनाउने हो । त्यसमाथि कुनै पनि देशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले त्यहाँ पार्ट टाइमका रुपमा काम गर्न पाउने सुविधा छ, यसर्थ पनि उहाँहरुले काम गरेर पैसा आर्जन गरीरहनु भएको छ । जसले ४÷५ बर्षको अवधिमा राम्रै पैसा कमाएर नेपालमा पठाउनु भएको छ । आज रोजगारका रुपमा जति नेपाली बाहिर छन् उनीहरुले भन्दा धेरै रेमिट्यान्स अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीबाट नेपाल भित्रिएको छ । त्यसका साथै विद्यार्थी वाहिर जाने भनेको त्यहाँको शिप, प्रविधि र शिक्षा नेपालमा भित्राउनु पनि हो भन्ने कुरालाई भुल्नु हुँदैन ।
नयाँ नेतृत्वको नयाँ योजनाहरु के कस्ता छन् ?
सबैभन्दा पहिले त सबै कन्सल्टेन्सीहरुलाई पारदर्शी, भरोसायूक्त, श्वच्छ प्रतिशपर्धाको वातावरण निर्माण गर्दै यो व्यबसायलाई सक्षम बनाउने हो । दोस्रो कुरा विभिन्न विश्व विद्यालय, कुटनितिक नियोगहरु, राज्यका सम्बन्धित निकायहरु, निजी क्षेत्र, अभिभावक सबैसँग मिलेर देशमा पर्यटनको विस्तारका लागि, विद्यार्थीले विदेशमा आर्जन गरेको शिक्षा र प्रविधिलाई यहाँ ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कुरामा लाग्ने हो । र तेस्रो कुरा भनेको सहिी निति निर्देशीका तयार गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने एवं नेपाललाई विश्वका विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउने वातावरणको विकास गरी शैक्षिक हब बनाउने जस्ता कुरामा मेरो नेतृत्वको कार्यसमिति अघि बढ्ने छ ।
मर्ज हुने तीनवटा बैंकको बिशेष साधारण सभा आज
विद्यालयको भौतिक सुधारमा आठ करोड खर्च